သင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း အလိမ်အညာ ၇ ခု – Gentleman Magazine
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း အလိမ်အညာ ၇ ခု
သင် ဗဟုသုတရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီက တစ်ခုခုကို ကြားလိုက်တာနဲ့ အလွယ်တကူ မယုံလိုက်ပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇီဝဗေဒနဲ့ ပါတ်သတ်လာရင် တော်တော်များများက ဘာမှ မသိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း ကြားနေရတာတွေရဲ့ ၉၀ ရာနှုန်းလောက်ဟာ အလိမ်အညာတွေပါ။ သင့်ရဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာ ပီကေဟာ ၇ နှစ်လောက် နေနိုင်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးမှာပါ။ အမှန်တကယ်တော့ တစ်ရက်ပါ။ သင့်ရဲ့ မိဘ၊ သူငယ်ချင်း၊ ရုံးက ဆရာကြီး၊ နောက်ဆုံး သင့်ရဲ့ ဆရာဝန်ဆီကတောင် ကြားရနိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း အလိမ်အညာ ၇ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. သင့်ရဲ့ဆီးဟာ ပိုးသတ်ပြီးသားပါ
သင့်ရဲ့ သေးဟာ ကြည်လင်တောက်ပနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆီးမှာ ဘက်တီးရီးယားမျိုးစိတ် ၈၅ မျိုးလောက် ပါဝင်နေပါတယ်။ အမျိုးသားတွေလဲ ဒိ့ထက်တော့ လျော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေရှားတဲ့ အခါမှာတော့ ပြန်သောက်သင့်ရင် သောက်ရမှာပါ။ ရေလိုအပ်ခြင်းဟာ ဘက်တီးရီးယားတွေကူးစက်မိတာထက် ပိုပြီး သေစေနိုင်ပါတယ်။
၂. အစားအစာတွေကို ပြုတ်ကြလို့ ငါးစက္ကန့်အတွင်း ပြန်ကောက်နိုင်ရင် ပိုးမကူးပါဘူး
တကယ်တော့ သင့်ရဲ့ အစားအစာမှာ ပါလာနိုင်တဲ့ ဘက်တီးရီးယားဟာ ကျနေတဲ့ အချိန်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ မြေကြီးအမျိုးအစားနဲ့ အစားအစာ အမျိုးအစားနဲ့ပဲ ဆိုင်တာပါ။ စိုစွတ်ပြီး ကပ်စေးတဲ့ အစားအစာတွေက ပိုပြီး ပိုးကူးစက်ပါတယ်။ အစာ မြေကြီးပေါ် ကျတာနဲ့ ပိုးက ကူးပြီးသားပါ။ ပိုးကူးတာ စားရင် ဝမ်းလျှောမှာပါ။
၃. အမွှေးရိတ်လိုက်လို့ ပြန်ပေါက်လာရင် အမွှေးပိုပြီး သန်လာပါတယ်
သင့် အမွှေးတွေကို ရိတ်လိုက်ရင် အမွှေးရဲ့ အမြစ်နားကိုရောက်သွားလို့ ပြန်ထွက်လာတဲ့အခါ ပိုပြီး ကြီးသယောင် မြင်ရတာပါ။ တကယ်တော့ ခဏခဏ ရိတ်ရင် အမွှေးပေါက်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဒုက္ခပေးသလို ဖြသ်နေလို့ ပိုပြီးတောင် ပါးသွားမှာပါ။
၄. ခြေထောက်ကြီးရင် လိင်အင်္ဂါ ကြီးပါတယ်
သန္ဓေသားဘဝမှာ Hox ဆိုတဲ့ Gene တစ်ခုက ခြေလက်အင်္ဂါတွေကို ကြီးအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူအယောက် ၁၅၀၀၀ လောက်ရဲ့ ဆိုဒ်တွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ လိင်အင်္ဂါအရွယ်အစားနဲ့ ခြေထောက်အရွယ်အစားနဲ့ ဆက်စပ်မနေပါဘူး။
၅. သင် အိပ်ရင်း လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ အနီးအနားက လူတွေကို ထိခိုက်တတ်ပါတယ်
အိပ်ရင်းလမ်းလျှောက်တဲ့သူက လူလိုက်သတ်တာ၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းလုပ်တာ မကြားဖူးပါဘူး။ အိပ်ရင်းလမ်းလျှောက်သူတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဘာလုပ်နေမှန်းမသိကြတော့ ဘေးနားကလူကို တွန်းမိတာလောက်ကတော့ ဖြစ်မှာပါ။ နှိုးဖို့ မကြိုးစားပဲ ချော့ချော့မော့မော့နဲ့ အိပ်ရာထဲ ပြန်ခေါ်သွားလို့ ရပါတယ်။
၆. သင့် ခန္ဓာကိုယ်အပူက ခေါင်းကနေ ထွက်သွားတာပါ
တကယ်တော့ အပြင်လေနဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ အရေပြားများလေလေ အပူထွက်လေလေပါ။ ခေါင်းဆိုတာ ဖြန့်ကြည့်ရင် လက်တစ်ချောင်းစာပဲ အရေပြားရှိတာပါ။ အဲဒါကို အစမ်းသပ်ခံလူတွေကို ရေခဲခန်းထဲ နေခိုင်းပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ အင်္ကျီထူထူဝတ်လို့ ခေါင်းပဲပေါ်နေရင်တော့ ခေါင်းကပဲ ထွက်မှာပါ။ ချမ်းနေရင် အင်္ကျီဝတ်ရုံသာမက ဦးထုပ်ပါဆောင်းထားပါ။
၇. သင့်ဦးနှောက်ရဲ့ ၁၀ ရာနှုန်းပဲ အသုံးချရသေးတာပါ
ဘယ်သူက အဲဒိပုံပြင်ကို စပြောလဲဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ သင့်ကို ပိုပြီး အားတက်လာအောင် စိတ်ခွန်အားအနေနဲ့ ပြောတာလဲ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်ကို စကင်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှတော့ အနားယူနေတဲ့ နေရာကို မတွေ့ရပဲ အချိန်တိုင်းလိုလို ဦးနှောက်တစ်ခုလုံး အလုပ်လုပ်နေတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဦးနှောက် ဘယ်နေရာပဲ ထိခိုက်ထိခိုက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သငျ့ခန်ဓာကိုယျအကွောငျး အလိမျအညာ ရ ခု
သငျ ဗဟုသုတရှိတဲ့ လူတဈယောကျဆီက တဈခုခုကို ကွားလိုကျတာနဲ့ အလှယျတကူ မယုံလိုကျပါနဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇီဝဗဒေနဲ့ ပါတျသတျလာရငျ တျောတျောမြားမြားက ဘာမှ မသိကွပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအကွောငျး ကွားနရေတာတှရေဲ့ ၉၀ ရာနှုနျးလောကျဟာ အလိမျအညာတှပေါ။ သငျ့ရဲ့ အစာအိမျထဲမှာ ပီကဟော ရ နှဈလောကျ နနေိုငျတယျဆိုတာ ကွားဖူးမှာပါ။ အမှနျတကယျတော့ တဈရကျပါ။ သငျ့ရဲ့ မိဘ၊ သူငယျခငျြး၊ ရုံးက ဆရာကွီး၊ နောကျဆုံး သငျ့ရဲ့ ဆရာဝနျဆီကတောငျ ကွားရနိုငျတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအကွောငျး အလိမျအညာ ရ မြိုးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
၁. သငျ့ရဲ့ဆီးဟာ ပိုးသတျပွီးသားပါ
သငျ့ရဲ့ သေးဟာ ကွညျလငျတောကျပနမှောပါ။ ဒါပမေယျ့ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ ဆီးမှာ ဘကျတီးရီးယားမြိုးစိတျ ၈၅ မြိုးလောကျ ပါဝငျနပေါတယျ။ အမြိုးသားတှလေဲ ဒိ့ထကျတော့ လြော့မှာ မဟုတျပါဘူး။ ရရှေားတဲ့ အခါမှာတော့ ပွနျသောကျသငျ့ရငျ သောကျရမှာပါ။ ရလေိုအပျခွငျးဟာ ဘကျတီးရီးယားတှကေူးစကျမိတာထကျ ပိုပွီး သစေနေိုငျပါတယျ။
၂. အစားအစာတှကေို ပွုတျကွလို့ ငါးစက်ကနျ့အတှငျး ပွနျကောကျနိုငျရငျ ပိုးမကူးပါဘူး
တကယျတော့ သငျ့ရဲ့ အစားအစာမှာ ပါလာနိုငျတဲ့ ဘကျတီးရီးယားဟာ ကနြတေဲ့ အခြိနျနဲ့ မဆိုငျပါဘူး။ မွကွေီးအမြိုးအစားနဲ့ အစားအစာ အမြိုးအစားနဲ့ပဲ ဆိုငျတာပါ။ စိုစှတျပွီး ကပျစေးတဲ့ အစားအစာတှကေ ပိုပွီး ပိုးကူးစကျပါတယျ။ အစာ မွကွေီးပျေါ ကတြာနဲ့ ပိုးက ကူးပွီးသားပါ။ ပိုးကူးတာ စားရငျ ဝမျးလြှောမှာပါ။
၃. အမှေးရိတျလိုကျလို့ ပွနျပေါကျလာရငျ အမှေးပိုပွီး သနျလာပါတယျ
သငျ့ အမှေးတှကေို ရိတျလိုကျရငျ အမှေးရဲ့ အမွဈနားကိုရောကျသှားလို့ ပွနျထှကျလာတဲ့အခါ ပိုပွီး ကွီးသယောငျ မွငျရတာပါ။ တကယျတော့ ခဏခဏ ရိတျရငျ အမှေးပေါကျတဲ့ ဆဲလျတှကေို ဒုက်ခပေးသလို ဖွသျနလေို့ ပိုပွီးတောငျ ပါးသှားမှာပါ။
၄. ခွထေောကျကွီးရငျ လိငျအင်ျဂါ ကွီးပါတယျ
သန်ဓသေားဘဝမှာ Hox ဆိုတဲ့ Gene တဈခုက ခွလေကျအင်ျဂါတှကေို ကွီးအောငျ လုပျဆောငျပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လူအယောကျ ၁၅၀၀၀ လောကျရဲ့ ဆိုဒျတှကေို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခါမှာ လိငျအင်ျဂါအရှယျအစားနဲ့ ခွထေောကျအရှယျအစားနဲ့ ဆကျစပျမနပေါဘူး။
၅. သငျ အိပျရငျး လမျးလြှောကျတဲ့အခါ အနီးအနားက လူတှကေို ထိခိုကျတတျပါတယျ
အိပျရငျးလမျးလြှောကျတဲ့သူက လူလိုကျသတျတာ၊ ကွမျးကွမျးတမျးတမျးလုပျတာ မကွားဖူးပါဘူး။ အိပျရငျးလမျးလြှောကျသူတှကေ သူတို့ကိုယျသူတို့ ဘာလုပျနမှေနျးမသိကွတော့ ဘေးနားကလူကို တှနျးမိတာလောကျကတော့ ဖွဈမှာပါ။ နှိုးဖို့ မကွိုးစားပဲ ခြော့ခြော့မော့မော့နဲ့ အိပျရာထဲ ပွနျချေါသှားလို့ ရပါတယျ။
၆. သငျ့ ခန်ဓာကိုယျအပူက ခေါငျးကနေ ထှကျသှားတာပါ
တကယျတော့ အပွငျလနေဲ့ ထိစပျနတေဲ့ အရပွေားမြားလလေေ အပူထှကျလလေပေါ။ ခေါငျးဆိုတာ ဖွနျ့ကွညျ့ရငျ လကျတဈခြောငျးစာပဲ အရပွေားရှိတာပါ။ အဲဒါကို အစမျးသပျခံလူတှကေို ရခေဲခနျးထဲ နခေိုငျးပွီး စမျးသပျကွညျ့ပွီးပါပွီ။ အကငြ်္ီထူထူဝတျလို့ ခေါငျးပဲပျေါနရေငျတော့ ခေါငျးကပဲ ထှကျမှာပါ။ ခမျြးနရေငျ အကငြ်္ီဝတျရုံသာမက ဦးထုပျပါဆောငျးထားပါ။
၇. သငျ့ဦးနှောကျရဲ့ ၁၀ ရာနှုနျးပဲ အသုံးခရြသေးတာပါ
ဘယျသူက အဲဒိပုံပွငျကို စပွောလဲဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။ သငျ့ကို ပိုပွီး အားတကျလာအောငျ စိတျခှနျအားအနနေဲ့ ပွောတာလဲ ဖွဈရငျဖွဈမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဦးနှောကျကို စကငျဖတျကွညျ့တဲ့အခါမှတော့ အနားယူနတေဲ့ နရောကို မတှရေ့ပဲ အခြိနျတိုငျးလိုလို ဦးနှောကျတဈခုလုံး အလုပျလုပျနတောကို တှရှေိ့ရပါတယျ။ ပွီးတော့ ဦးနှောကျ ဘယျနရောပဲ ထိခိုကျထိခိုကျ အကြိုးသကျရောကျမှု ရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။
Previous: သင့်ဆံပင်ကို သင် အရူးအမူးဖြစ်နေကြောင်း လက္ခဏာ ၁၆ ခု
Next: ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ဖုန်းကို မထိသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု